စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။
Posted by မိုးတိမ် on Nov 9, 2012 in News | 28 comments
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တကျော့ပြန် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် မရပ်တန့်နိုင်ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ရခိုင်ဒေသရဲ့ တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက် လာနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စမှာ နှုတ်ဆိတ်နေမယ် ဆိုရင် မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းဟာ နောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ် လို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာလဲ။ ဒါဟာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာလည်း မဟုတ်သလို လူမျိုးရေးဆိုင်ရာလည်း မဟုတ်ပါဘူးလို့ ရည်ညွှန်းထားပါတယ်။ အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဆူရင် ပစ်ဆူဝန်ရဲ့ ‘ဒီကိစ္စဟာ နိုင်ငံရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဥပဒေဆိုင်ရာ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်တယ်’ ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်း ကြားမိပါရဲ့ ။ ဒါ့အပြင် လူတစ်စုကနေ ဒီကိစ္စတွေ ဖန်တီးဖို့ နောက်ကွယ်က ကြံစည်နေတာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်း ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း တုံ့ပြန်ဖို့ လက်နှေးနေတဲ့အတွက် အပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီအတွင်းက အမာခံ ခေါင်းဆောင် တစ်ချို့ကနေသမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်ဆောင်တာလို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ဖြစ်နှိုင်ချေတစ်ခုကတော့ စစ်တပ်ကို လူမြင်ကွင်းထဲ ပြန်ခေါ်လာပြီး အာဏာကို ပြန်ထိန်းဖို့ ကြိုးစားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ မဟာဗျူဟာ ကျတဲ့ နေရာ တစ်ခုမှာ တည်ရှိနေတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံကနေ တစ်ဆင့် အန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာဆီကို ထွက်ပေါက်ရဖို့ တရုတ်က ကြိုးစားနေသလို တရုတ်ရဲ့ ဩဇာအာဏာကို ပြန်ထိန်းဖို့ အမေရိကန်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို အလိုရှိနေပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်မစ် ဝါဒီတွေရဲ့ မျက်စိကျခြင်းကို ခံနေရတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အခု နောက်ဆုံး ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေ မဖြစ်ခင်က ဖိလစ်ပိုင်မှာ မင်ဒါနာအိုက မူဆလင် အကြမ်းဖက်သမားတွေကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် အပြည့်အဝ ပေးခဲ့ရတာကို မှတ်မိကြမှာပါ။(ပြည်ထောင်စု အစိုးရကနေ စွတ်ဖက်ခွင့် မရှိ သလောက် ဖြစ်သွားတယ်။) ဇွန်လအတွင်း အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှာ အစွန်းရောက် မူဆလင်တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို တိုက်ဆိုင်မှုလို့တော့ ပြောလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အာရပ် နွေဦးတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မူဆလင် အစွန်းရောက်တွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဦးတည်ချက်ကို အမေရိကန်ဆီ တိုက်ရိုက် ပစ်မှတ်ထားရာကနေ အမေရိကန်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား ရှိတဲ့ နေရာတွေကို ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ ၈၈ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ပြောသလို သူတို့အနေနဲ့ ပိုပြီး အားနည်းတဲ့ ဒေသတွေကို ဦးတည်လာတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဲဒီ့ ဒေသတွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား ရှိတဲ့ ဒေသတွေ ဆိုရင် သူတို့ အနေနဲ့ ပစ်မှတ်ထားလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဏာရှင် လက်အောက်ကနေ လွတ်မြောက်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ ဒီတော့ ဒီမိုကရေ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင်နေတုန်း အာနည်းနေသေးတဲ့ အချိန်မှာ လာပြီး အားစမ်းတာလား။ ဒီတွေးထင်ယူဆချက်မျိုးဟာ လုံးဝ ပြစ်ပယ်လို့ မရဘူးဆိုတာ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူတိုင်း သိကြပါတယ်။ ဇွန်လမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံ မတိုင်မီ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ့ အချိန်က နိုင်ငံတကာကလည်း ဒီအရေးကို အလေးထားခဲ့ကြပါတယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီဖြစ်စဉ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ကင်တာနားတို့ OIC တို့ က လူ့အခွင့်ရေးဆိုတာတွေ အသံပိုကျယ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ ပြန်လည် ဝင်ဆံ့ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့လည်း OIC ကို လက်ခံခဲ့ပြီး ကင်တားနားကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို လာဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ OIC ရုံးဖွင့်ဖို့ ကိစ္စတွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါး လက်မခံ နိုင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီ့ ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်OIC ကိစ္စတစ်ခန်းရပ်ပြီးချိန်မှာ ရခိုင် ပဋိပက္ခကတွေ ချက်ချင်းပဲတစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်တာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါဟာ တိုက်ဆိုင်မှုလား။ ဖြစ်ပြန်တော့လည်း အာဆီယံ ထိပ်သီး အစည်းအဝေး မလုပ်ခင်လေးတင်ပါပဲ။ အာဆီယံမှာ ဒီကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင်လာ နိုင်ပါသလား။ (အရှေ့အလယ်ပိုင်း နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ တခြား ပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးရမှာ စိုးလို့ အမြဲတမ်း အစ္စရေး ပါလက်စတိုင်း ပြဿနာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့တဲ့ သာဓကတွေရှိပါတယ်။) အာဆီယံအနေနဲ့ အဓိကပြဿနာတွေကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှု မပြုပဲ ရခိုင်အရေးကို နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စတစ်ခုလို သဘောထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အခုပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့ ကျောက်ဖြူဒေသဟာ ရေနံနဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းရဲ့ အဓိကနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကိုလည်း ၂၀၁၃ မှာ လည်ပတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာ ချိန်ကိုက်ပြီး ပဋိပက္ခတွေ ဖန်တီးခဲ့သလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။ ဒါကို တိုက်ဆိုင်မှုတွေလို့ပဲ ထင်သလားဘယ်လို ထင်ကြပါသလဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒါတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုလို့မထင်ပါဘူး။ တကယ်လို့ အဲဒီ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို အစွန်းရောက် မူဆလင် အုပ်စုတစ်စုကနေ လုပ်နေပြီးတော့ ဖိလစ်ပိုင် တုန်းကလိုမျိုး အကြွင်းမဲ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် တောင်းဆို မလို့လား။ မြန်မာနိုင်ငံသား အများစုဟာ ဘင်္ဂါလီတွေကို မြန်မာ့တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအဖြစ် လက်မခံချင်ဘူးဆိုတာ မှန်ပေမယ့် နိုင်ငံသားအဖြစ် (လုံးဝ) လက်မခံနိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ စာပေကို ကျွမ်းကျင်ပြီး တရားဝင် နိုင်ငံသားအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ သူတွေကိုတော့ နိုင်ငံသားပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ နေလာတဲ့ သူတွေကိုလည်း မြန်မာစာပေ ကျွမ်းကျင်မှုရှိရင် ဧည့်နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုနိုင်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေဟာ အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေထိုင်လို့ရပါတယ်။ အရင်လည်း နေခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်သူတွေ ဖျက်ခဲ့ကြတာလဲ။ အလေးအနက်ထားဖို့ လိုတဲ့ အချက် နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးတယ်။ ဘင်္ဂါလီတွေကို ဒုက္ခသည် စခန်းတွေနဲ့ ထားတာ မကောင်းပါဘူး။ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကနေ အစွန်းရောက်တွေ ပေါက်ဖွားတာမျိုး မလိုချင်ပါဘူး။ လက်ရှိ မြန်မာပြည်တွင်းကို ရောက်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို သူတို့ရဲ့ မူရင်းနိုင်ငံ ဒါမှမဟုတ် တတိယနိုင်ငံ တစ်ခုခုကို ပို့ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ဘင်္ဂါလီတွေကို ခွဲခြားပြီး ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်း အချိန်မှာ ပဋိပက္ခတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေ အနေနဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့် လွှတ်တော် ထဲဝင်ရောက်ခွင့်တို့ တောင်းဆိုလာနိုင်ပါတယ်။ (ဧည့်နိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့ ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ မရှိပါဘူး။) ဒါ့ကြောင့် သူတို့ကို ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အတူတူ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်နှိုင်ဖို့ကမဖြစ်နှိုင်သေးဘူးလို့မြင်ပါတယ်။ဘင်္ဂါလီတွေပညာတတ်ပြီးအစွန်းမရောက်တဲ့စိတ်ထားရှိမှရပါမယ်။ပြောသာပြောရတာပါ ပညာတတ်ဘင်္ဂါလီတွေကလဲ ဓါတ်ပုံတောင်တွဲမရိုက်အောင် အောက်တန်းကျခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂါလီတွေဟာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံသားမဟုတ်သလို ကျုပ်တို့နဲ့လဲအယူအဆ၊ပြောတဲ့စကား၊ယဉ်ကျေးမှု့တစ်ခုမှမတူပါဘူး။ရခိုင်ဒေသမှာ စီပွားရေးနဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍကိုလည်း ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒေသတစ်ခုဟာ ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး ဒေသခံတွေ အသိဉာဏ် ကြွယ်ဝလာပြီဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ပဋိပက္ခတွေလည်း အဖြစ်နည်းလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဲပေးဖို့တော့ မျိုးဆက် ၂ဆက်ထက်မနည်း စောင့်ရပါမယ်။ ဒါ့အပြင် ဘင်္ဂါလီ ဝန်ထုပ် ဝန်ပိုးကို ရခိုင်ဒေသ၊ ရခိုင်လူမျိုး တွေချည်းပဲ ထမ်းဖို့ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် စီစစ်ပြီး နိုင်ငံသား စစ်မှန်ရင် နိုင်ငံသားတွေ နည်းတူ အခွင့်အရေး ပေးရမှာပဲပေါ့။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ လှည့်လည် သွားလာခွင့်ကိုလည်း စဉ်းစားရပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိစ္စတွေဟာ အမျိုးသားရေး ပြဿနာ၊ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တင်ပြပြီး ဖြေရှင်းရမယ့် နိုင်ငံတကာ အရေးကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပြဿနာတွေကို ဒေသတွင်းမှာသာ ဖြေရှင်းဖို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်ရင်တော့ ကျောက်ဖြူ ပိုက်လိုင်း ကိစ္စလိုမျိုး စီမံကိန်းတွေ ဖော်ဆောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ တရုတ်ရဲ့ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီး အုပ်မှုကိုလည်း မခံရအောင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက် ပျက်စီးမှုလည်း နည်းပါးအောင် လုပ်ကိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒီလို စီမံကိန်းတွေကနေ ဒေသခံတွေ အတွက် အကျိုးအမြတ်တွေ ရရှိအောင် ဖန်တီးရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့် အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ခေါင်းဆောင်တွေ အနေနဲ့ အမြင်မတူတဲ့သူတွေဆီက မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေ ရယူဖို့ လိုပါတယ်။ သမိုင်း မှာလည်း အဲဒီ့လို မလုပ်ခဲ့မိလို့ ထိခိုက်တာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘင်္ဂါလီ လူများစု ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ယခု နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ဘင်္ဂါလီ လူနည်းစု နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂါလီတွေဖက်က စခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစား စရာပါ။ သူတို့ကို ရခိုင်တွေကနေ နှိပ်စက်နေတယ်လို့ ရှုမြင်စေချင်လို့လား။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားတွေ အနေနဲ့လည်း ဒေါသတွေကို ထိန်းဖို့လိုပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ပေါ်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ အခုတော့ အဲဒီ့ လူမျိုးစုကို အကြောင်းပြပြီး တောင်းဆိုနေတာဟာ ဖိလစ်ပိုင်မှာ အစွန်းရောက်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု တောင်းဆိုပုံနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိပါဘူး။ မြန်မာ့သမိုင်းမှာလည်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ နိုင်ငံ ပထဝီဝင် အနေအထားတွေနဲ့ နိုင်ငံရေး အသွင်အပြင်တွေကို မီးမောင်း ထိုးပြလိုက်တာပါပဲ။ ဒါ့အပြင် အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း သံသယ ဝင်စရာ ရှိပါတယ်။ သူတို့နဲ့ အစွန်းရောက် မူဆလင်တွေ ကြားမှာ ရှိနေတဲ့ ပြဿနာတွေကို အရှေ့တိုင်းဖက် အာရုံ လွှဲတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောနိုင်သလား။ အဲဒီ့လိုမျိုး စိတ်ကူးတွေ ရှိနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ တချိန်တုန်းကလည်း ဘီဘီစီက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို ရိုဟင်ဂျာ ဒေသလို့ ဖော်ပြခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ဒီတော့ အစိုးရကိုပဲ အပြစ်ပုံချနေလို့လည်း မဖြစ်သေးပါဘူး။ မြင်ကွင်းနောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လည်း အပေါ်ယံရှုမြင်နေလို့ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ လေးလေးနက်နက်နဲ့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ထောက်ပြခဲ့သလိုမျိုး အုပ်ချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းတာ တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်သလို၊ လက်ရှိကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေ၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ပထ၀ီနိုင်ငံရေး နဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့ အခြေနေတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြရမှာပါ။ တကယ်တော့ ဒီပြဿနာဟာ သာမန် အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာနဲ့ နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းလည်း မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို အစိုးရချည်းသက်သက် ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အတိုက်အခံတွေ အနေနဲ့လည်း နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေတဲ့ လက်တွေကို မြင်နေရပါမယ်။ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်ကိုလိုလားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုနွယ်တွေအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ အစွန်းရောက် ဘာသာရေးသမား အဲဒီ့လိုလူတွေ လက်ထဲကို ကျရောက်သွားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကို လစ်လျူရှုထားလို့မရပါဘူး။ကျုပ်တို့ ထည့်စဉ်းစားဖို့ပဲ မေ့နေခဲ့တာလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံတကာ သတင်းဌာနတွေရဲ့ ရေးသားမှုတွေကြားမှာ မလွန်ဆန်နိုင်တာလား။လားပေါင်းများစွာတွေးရင်း စဉ်းစားခန်းထဲရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ဦးပါ။
cloudy မိုးတိမ် has written 10 post in this Website..
လေနှင်ရာကိုရွက်လွှင့်၊နေချင်သလိုနေ၊Everyday is the blessing လို့ ဘဝကိုပျော်ပျော်နေသူကို မိုးတိမ်ဟုခေါ်သည်။
View all posts by မိုးတိမ် →
သဂျီးရေ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေတွေပြန်ဖတ်နေပါတယ်။ကိုမိုးညိုကိုလဲ ရှင်းပေးပါ့မယ်။ကျုပ်လဲ post ကို အချိန်ရရင်ရသလောက်တင်ပေးပါ့မယ်။ထင်ရာမြင်ရာကိုလဲပြောချင်သလို ပြောပါ့မယ်။အရီးကိုတော့လေးစားလို့ဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။သို့သော် အရီးရေ ကျွန်တော်ရန်သူမဖြစ်ချင်ဘူးခင်ည။အရီးအင်္ဂလိပ် post တွေဖတ်နေရတဲ့ တပည့်တစ်ယောက်ကို သဂျီးမျက်နှာနဲ့ ကျွန်တော့ကိုရန်သူလိုမဆက်ဆံစေချင်ပါဘူး။
face book မှာကျွန်တော် အားလုံးအရီး ဘာသာပြန်တာတွေကိုဖတ်နေလို့ပါ။အခုဟာနဲ့တော့မဆိုင်လို့ sorry ပါ။ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သဂျီးက ကျွန်တော့ကို တရားစွဲမယ် ခြိမ်းခြောက်ထားလို့။ကြောက်နေတယ် ဂစ်ဂစ်………..
အရီး ကို လေးစားတယ် လို့လို့ အတော်လေး ပီတိဖြစ်ရပါတယ်။
သို့ပင်သို့ညား အရီး facebook မှာ ဘာကိုမှ ဘာသာပြန် မရေး တာမို့ လူမှားပြီး လေးစားနေတာ ကို သိရတော့ အတော်လေး ဝမ်းနည်း မိပြန်တယ်။
ဘာသာပြန်နိုင်လောက် တဲ့ အရည်အချင်းလဲ မရှိပါဘူး။
ဒီလိုဘဲ သူများတွေပြောတာ တွေနားထောင်ပြီး ရွာထဲမှာ ဝင်ရွှီးနေတာပါ။
အခုဆို facebook မသုံးတာတောင် ကြာပေါ့။
ဘယ်သူနဲ့ များ မှားနေလဲ မသိ။
ကဲ မောင်ရင်လေး ရေ
မင်းကိုလဲ အရင်ကထဲ က အရီး ခင်မင်ရင်းစွဲ အမှန်ပါ။
မင်း ရဲ့ လေထဲက အတွေ့အကြုံ လေးတွေကိုတောင် ရေးဖို့ တိုက်တွန်းသေးတာ မဟုတ်လား။
ဒီရွာထဲမှာ ဒီလိုဘဲ အငြင်းအခုန် လုပ်တာ ထုံးစံပါလေ။
ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်း မပြောဆိုကြဖို့ဘဲ လိုတာပါ။
ဒီအတိုင်း ပြောတာကတော့ သူကြီး ကိုတောင် တီး နေကြဘဲလေ။
အရီးရေ မန်းလေးဂေဇက် ဖေ့ဘုတ်မှာ အရီးဘာသာပြန်ထားတယ်ထင်လို့ပါဗျ။တစ်ချိန်ချိန်ကျရင် သေခါနီး၊သေမလိုဖြစ်စဉ်တွေရေးဦးမှာပါ။အခုတော့သဂျီးမင်းက တရားစွဲမယ်ဆိုလို့အေးအေးနေနေရပါတယ်။ကျုပ်ဘဝမှာလဲ အခုချိန်ထိကိုမသေနှိုင်သေးဘူး။အန္တရယ်ကို ပျော်ပျော်ကြီးရင်ဆိုင် ပျော်ပျော်ကြီးတိုက်ခိုက်နေတဲ့
မောင်မိုးတိမ်ပါခင်ည။ပြောရရင် မနေ့ကတောင် ကံကောင်းလို့မသေတာခင်ဗျ။ခဏခဏတော့ကံမကောင်းလောက်ဘူးထင်တာပါပဲ။အခုထိတော့မ
သေသေးသော မောင်မိုးတိမ်ပါ။အဲတော့ သဂျီးဆိုသောလူဂျီးအတွက်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
သူခိုးကလူဟစ်မနေပါနဲ့မောင်မိုးတိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍သူခိုးကလူဟစ်ပြောဆိုနေကြသောသူများသည်အသိဥာဏ် မရှိပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုများ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားမောင်းထုတ်ရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆန္နပြမှုများ၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုမောင်းထုတ်ရန်
ရခိုင်းအစွန်းရောက်များအားလုံးရသေ့တောင်ဘုန်ကြီးကျောင်းတွင်စုရုံးပြီး၊၀ါတွင်ကာလကိုပင်မရှောင်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားသတ်ဖြတ်မောင်း ထုတ်ရန်ရသေ့တောင်ကြေငြာချက်၊ကြငြာ ချက်များအစရှိသည်တို့သည်ထင်ထင်ရှားရှားရှိသောမှတ်တမ်းစာ၇ွက်များဖြစ်ကြပါသည်။အဆိုပါ ကိစ္စရပ်များလုပ်နေသောအားတရားခံများအားသိရှိပါလျှက်ပြင်ပပယောဂပါသလို့၊မရောင်ရာဆီး လူပြောကြားချက်များသည်လက်ရှိတရားခံများ ကိုဖုံးဖိလိုသဖြင့်ပြောကြားချက်များသာဖြစ်ပါသည်။ရခိုင်အရေးအခင်းတွင်မည်သည့် ပြင်ပပရာဂမှမပါပါ၊လက်၇ှိပြည်တွင်ရှိရခိုင်အစွန်းရောက်တရားခံများ၊
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များလက်ချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်။မောင်းထုတ်ခံအသတ်ခံရသူများသည်မိမိတို့အသက်လုပြီးထွက်ပြေးနေရသူများကိူုပင် နောက်ကွယ်ကြိုးကိုင်သူရှိသည်ဆိုသည့်ပြောကြားချက်မှလည်းလူရယ်ဖွယ်ရာပြောကြားချက်များပင်ဖြစ်ပါသည်။ယခုရခိုင်အရေးအခင်းထပ်မံပေါ်ပေါက်လာရခြင်းသည် လည်းအေးချမ်းနေသောရခိုင်အခြေအနေကိုပြန်လည်သွေးဆူလာအောင်ဆန္နပြပွဲပြုလုပ်ခိုင်း ကာသွေးထိုးပြီး၊သွေးဆူစေပြီးရခိုင်အစွန်းရောက်များက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုထပ်မံမောင်းထုတ်မှုဖြစ်ပါသည်။အေးချမ်းနေသောအခြအနေကိုဆူပူစေရန်ဆန္နပြရန်လှုံဆော်သူခေါင်းဆောင်များ၊ဆန္နပြသူများနှင့်ခွင့်ပြုသူများမှာတရားခံများဖြစ်ကြပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဒီပဲယင်းအရေးအခင်းကိစ္စအားအမေရိကန်နိုင်ငံယေလ်တက္ကသိုလ်တွင် ပြေ ကြားသကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဒီပဲယင်းတွင်ဝိုင်းအရိုက်ခံအသတ်ခံရပြီးကိုယ်ကိုလာရိုက်လို့ထွက်ပြေးလာရသူကိုအဖျက်သမားတွေလို့စွတ်စွဲပြီးအကျယ်ချုပ်(၆)နှစ်ကျမကိုချလိုက်ပါတယ် နောက်သူခိုးဝင်တော့အိမ်ရှင်ကိုအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီ့းထောင်ချလိုက် ပါတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားချက်များကဲ့သို့ဥပဒေမရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားရခိုင်အစွန်းရောက်များကမောင်းထုတ်မီးရှို့ သတ်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးရသည်ကိုကိုယ်အိမ်ကိုယ်မီးရှို ထွက်ပြေးသည်ဆိုကာအရှက်မရှိတင်ပြကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲသို့တင်ပြကြသူများမှRNDPမှ အေးမောင်တို့ဖြစ်ပါသည်။
။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်ကလည်းဘုန်းကြီးအယောင်ဆောင်တွေကဘဲတိုက်ခိုက်တာပါလို့သူမကဆိုပါတယ်၊ ။ကိုယ်ကို သတ်ဖို့လာတဲ့သူတွေလက်ကလူမသိအောင်ထွက်ပြေးတာ ကိုယ်အိမ်ကိုယ်မီးရှိုပြီးမီးရောင်ထဲကထွက်ပြေးနိုင်မပြေးနိုင်ဆိုသည်ကိုဥာဏ်
ရှိသူတိုင်းစဉ်းစားနိုင်ပေသည်။ကိုယ်အိမ်မီးရှိုပြီးဘယ်မှနေမလဲ၊အိမ်တွေ၊ဗလီတွေမီးရှိုပြီးလိုက်သတ်ခံရလို့ထွက်ပြေးရတာ၊ဒုက္ခသည်စခန်းဆိုတာ ငတ်ပြတ်နေတဲ့နေရာများသာဖြစ်သည်။သူတို့ရေးသလို့ဆိုဘင်္ဂလားဒေရ်ှမှဘုန်းကြိးတွေကိုယ်ကျောင်းကိုယ်မီးရှိုတယ်လို့ရေးကြရမည်ဆိုလျှင်ဘယ်လ်ိုခံစားရမည်ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ လူဆိုတာ၊ကိုယ်အိမ်၊ကိုယ်ရွာကိုအခင်တွယ်ဆုံးဖြစ်ရာတိရိဆ္ဆန်များပင်ကိုယ်အသိုက်အအုံကိုကိုဖျက်ဆီး သည်မရှိဘဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ မိမိအိမ်မိမိဆိုင်၊ဗလီများမီးရှိုသည်ဆိုကာရခိုင်အစွန်းရောက်မီဒီယာများကအရှက်မရှိရေးသားတင်ပြပြီူး ယုံသောသူများသည်လည်ယုံကြည်ကြသည်ကိုဝမ်းနည်းဖွယ်ရာတွေမြင် ရပါသည် ။ထိုအခြေအနေများသည်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအစ္စလာမ်ဘာသာ မရှိအောင်မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မောင်းထုတ်နေမှုဖြစ်ပါသည်။ဤသည်ကိုပင်ရခိုင်းအစွန်းရောက်များကမွတ်ဆလင်တွေစတင်သလို့အ၇ှက်မရှိတင်ပြချက်များကိုလည်းတွေရပါသည်။လူနည်းစု့များသည်လူများစု့ကိုစိုးရွံကြောက်ရွံနေရချိန်တွင်လူများစုကိုရန်စမည်လား၊လူများစုကရန်စပြီးအကြောင်းရှာမောင်းထုတ်သတ်ဖြတ်မည်လားဆိုသည် ကိုဥာဏ်ရှိသူတိုင်းစဉ်းစားနိုင်ပါသည်။ပြီးတော့ရခိုင်အစွန်းရောက်များထုတ်ထားသောကြေငြာစာများကလည်းအစ္စလာမ်
ဘာသာဝင်များကို မောင်းထုတ်ရန်၊နှင့်ထုတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာချက်ကမည်သူ စလုပ်သည်ကို သိရှိနိုင်သောသက်သေခံချက်ဖြစ်နေပါသည်။
စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။သေဆုံးသောစရင်းဖျက်ဆီးခံရသောစာရင်များကိုထုတ်ပြန်သောအခါလည်းပေါ်ပေါ်တင်တင်သိရှိနိုင်ပေရာအဆိုပါစာရင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုရောမွေပြီး မလိမ့်တပတ်ဖြင့်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။မွတ်ဆလင်တွေထွက်ပြေးတဲ့အခါ ရန်သူတွေဝိုင်းထားသတ်ဖို့လုပ်နေတာကို ငါတို့ဒီနေရာမှာဆိုပြီးမီးရောင်ထဲပြေးနေလို့ရလို့လား၊ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတာမှောင်ထဲမဲထဲမှာပြေးရတာကွ၊မီးလောင်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ကိုယ်ကိုသတ်မဲ့လူတွေမြင်ပြီး၊ဘယ်နေရာကိုပြေးလို့ရမလဲ၊ချီးစားထားတဲ့ ဥာဏ်တွေနဲ့နဲ့ပါပါးစဉ်းစားတတ်ရင်တောင် ဒီလို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဟုဒေသခံတစ်ဦးကဆိုပါသည်။ယခုကဲ့သို့မစဉ်းစားဘဲပေါက်ကရပြောဆိုနေသောသူများမှာစဉ်း စားနိုင်သောအသိဥာဏ်ပညာမရှိကြခြင်းကိုဖေါ်ပြနေသည်လား၊ရခိုင်တွင်တရားခံကိုဖုံးဖိပြီးလူများကို အပြစ်ပုံချချင်သူများနေသည်လားဆိုသည်ကို မသိနိုင်ကြတော့ပါ။ယောက်ကျားဆိုသည်မှကိုယ်လုပ်လျှင်ကိုယ်ခံရဲသူများဖြစ်ရာယခုကဲ့သို့ ကိုယ်အပြစ်ကိုယ်ဝန်မခံချင်သူများမှာယောင်္ကျားများမဟုတ်ကြပါ၊သွေးကြောင်နေသူများသာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ညအချိန်တိတ်တဆိပ်သူခိုးဝင်လျှင်ပင် ဖမ်းဆီးနိုင်ပေရာယခုနေခင်းကြောင်းတောင်လက်နက်ကိုင်ပြီးရွာများအိမ်များကိုမီးရှိုဖျက်ဆီးလူသတ်နေသူများကိုမဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းလွန်စွာအံသြဖွယ်ကောင်းလှပါသည်ဟုနိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကဆိုပါသည်။ပြီးလျှင်ရခိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဘောလုံးပွဲကြေငြာသကဲ့သို့မည်သည့်မြို့တွင်မိးလောင်သည်ပြိး လျှင်မည်သည်မြို့မီးလောင်သည်စသောကြေငြာချက်များကလည်းလူရယ်ဖွယ်ဖြစ်နေပါသည်။
၀င်များမိမိအိမ်မိမိမီးရှိုထွက်ပြေးသည်ဆိုသည်မှဟုတ်သလို့လို့ဖြင့်နောက်တကြိမ်တွင်လည်းထို့ကဲ့သို့သတင်းထုတ်ပြန်နေသည်မှာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းမိမိသိရှိကြောင်းအစည်းအဝေးတွင်တရားဝင်ပြောကြားသွားပါသည်။ဇတ်တိုက်ထားသလို့ရခိုင်အစွန်းရောက်သတင်းဌာနများမှ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမိမိအိမ်၊ရွာဗလီများမီးရှိုထုတ်ပြန်သည်မှာလိမ်ညာထုတ်ပြန်နေသည်ဟုမိမိသိရှိကြာင်းပြောဆိုခဲ့ပါသည်။မဟုတ်နိုင်သည်ကို စဉ်းစားဥာဏ်ရှိသူတိုင်းသိရှိနိုင်ပါသည်.
“ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးမှာ အစိုးရမှာ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လုံလောက်တဲ့ အင်အားမရှိဘူး။ အင်အားနည်းနေတယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက လုံခြုံရေး တာဝန်တွေကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထမ်းဆောင်ခွင့်မရလို့ အခြေအနေတွေကို မအုပ်မိ မထိန်းမိတာလို့ပဲ ကျွန်တော်ကတော့ မြင်တယ်။ သမ္မတကြီးက စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေတာတွေကို သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မြေပြင်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘူး။ အောက်ခြေမှာ တာဝန်ခံပြီး အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ လူတွေက မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကို ရိုးရိုးသားသား ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ၀န်ထမ်းကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့ အလုပ်မလုပ်ကြဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက အကြမ်းဖက်သမားတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ပြည်နယ်အစိုးရက အကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကို မထိန်းဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးလှမောင်တင်နဲ့ လုံခြုံရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း အပါအ၀င် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုကို မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘော၊ အကြမ်းဖက် ကွန်ရက် အောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ သဘောရှိတယ်။ မထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာမှာ ကိစ္စတစ်ခုကို တာဝန်မယူနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် အစိုးရများဟာ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်ကြပါတယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ကိုယ် နှုတ်ထွက်သင့်ပါတယ်။ အခု (၅)လ ကျော်ကြာတဲ့အထိ ဒီဒေသမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ဘာကြောင့်မလုပ်နိုင်တာလဲ။
ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို လုံးဝတာဝန်ယူနိုင်မှုမရှိတဲ့ လက်ရှိပြည်နယ်အစိုးရထွက်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ပြန်ဖွဲ့ပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်။” ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ
သောမတ် ကိုဟေး ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေပြီး အထက် အမိန့်အရ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက အခြေအနေတွေကို သာမန်ထိန်းသိမ်းမှု ကြိုးပမ်းမှုမျိုး သာရှိတယ်လို့ မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောပါတယ်။
အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်နေပြီး ဒါဟာ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့လည်း မစ္စတာ ကင်တားနားက ပြောသွားပါတယ်။
“ကျနော့်အယူအဆကတော့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဆိုတာဟာ မျှော်လင့်ချက် တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အခြေအနေကတော့
ဆယ်စုနှစ်တွေ နဲ့ချီပြီး စစ်အစိုးရအုပ်စိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငမှာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မရှိပါဘူး။ ဒါဟာ အစိုးရအတွက်သာမက လွှတ်တော်အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူအားလုံး အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ တစ်ရပ်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှုးပြုပြီး ဖွဲ့စည်း ပေးထားတာလည်း သိရပါတယ်။ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမထားပါ။
ရင် ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးတွေပါလာမှာမို့လို့ ကျေးဇူးရှင် areno areno ပို(စ့်)တင်တဲ့ကောင်တောင်ပြန်မရှင်းတော့ဘူး။ရဲခေါင်ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ကတော့မလိုက်ဖက်တာတစ်ခုတော့ပြောပါရစေ။ပြီးတော့ ခင်ဗျားကိုရှင်းရလောက်အောင်လဲ ဘက်မတူဘူးလို့ယူဆလို့ကိုမရှင်းတာဆိုရင်သဘောပေါက်ပါ။
ဒါနဲ့ အရီး ထင်တာနော်။
သန်းခေါင်စာရင်း နဲ့ ရခိုင်အရေး ဆက်စပ်မှု ရှိသွားမှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ရခိုင် အရေးကြောင့် သန်းခေါင်စာရင်း ထကောက်တာ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ရခြင်းဟာ လူဦးရေ ရေတွက်လိုခြင်းထက် ရည်ရွယ်ချက် အများကြီး ပို ကြီးမားရမှာပါ။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်နေတယ် ဆိုတာက လဲ အရေးကြီးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းက အချက်တွေကို ကြည့်ပြီ တိုင်းပြည် ရဲ့ လိုအပ်တဲ့ / ဖြစ်သင့်တဲ့ project တွေ အတွက် ဘတ်ဂျက်ချပြီး လုပ်ကိုင်ပေးနိုင်ဖို့ပါ။
လူတွေ ကို ဒုက္ခပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ တရားမဝင် ကျူးကျော်ဝင် နေသူတွေ အတွက်လဲ ပြတ်သားတဲ့ ဥပဒေ ရှိကိုရှိရပါမယ်။
အဲဂဒါက အဓိကပါပဲ အရီးရေ။အရီးကိုလေးစားတာ အဲဒါတွေလဲပါပါတယ်။ရခိုင်အရေးဖြစ်ပြီတော့မှ သန်းခေါင်စာရင်းစကောက်တာပါခင်ဗျ။ဆက်စပ်မှု့တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဆက်စပ်မှု့တွေနောက်ကွယ်မှာအများ
“ဇွန်လအတွင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ ဘင်္ဂါလီ လူများစု ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ယခု နောက်တစ်ကြိမ်မှာ ဘာဖြစ်လို့ ဘင်္ဂါလီ လူနည်းစု နေရာတွေမှာ ဘင်္ဂါလီတွေဖက်က စခဲ့သလဲဆိုတာ စဉ်းစား စရာပါ။ သူတို့ကို ရခိုင်တွေကနေ နှိပ်စက်နေတယ်လို့ ရှုမြင်စေချင်လို့လား” ပို.စ် ကအစပိုင်းကတော့ fair ဖြစ်သလိုနဲ့ ဒီနေရာရောက်တော့မှနဲနဲလေးဘေးချော်သွားလားလို့ ။ထွက်ပြေးရင်လွတ်မယ် ဆိုတဲ့မသေချာတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ.တော့ လူတစ်ယောက်ဟာ တခြားလူဆယ်ယောက်ကိုအသက်နဲ့ရင်းပြီးရန်စရှာရဲပါ့မလားဆိုတဲ့လက်တွေ.ကျကျအယူအဆလေးသာပါလိုက်မယ်ဆိုရင် အတော်ကောင်းမဲ့ ပို.စ်ပါ
ဲ ပိုက်ထဲ ငါးတွေ တိုးဝင်လာကြပြီ ကိုကြီးစိုး. ပြောတဲ့ နှစ်.၁၀၀၀ ပေါ့ အမှန်ပဲ
မြင်ဖူးတာပြောပြမယ်..ရပ်ကွက်ထဲ ခွေးရူးဝင်လာပြီဆိုရင်..ခွေးကောင်းတွေ ဘယ်လောက်ပဲ အုပ်တောင့်တောင့် အကုန်ပြေးရတာပါပဲ။ ၁၀ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ သတင်းလေးဘာလေး ကြည့်ပေးရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။ “Genocide of Rohingya” “racist Rakhines” ဆိုပြီးတော့သူတို့ ဘာအတွက် အတင်းစွတ်အော်နေတာလဲ??.. သူတို့ကအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့တာရှိလို့ပဲ။ သူတို့ကအဲတာတွေကို ဖုံးကွယ်ပစ်လိုက်ချင်လို့ပဲ။ ရခိုင်တွေဟာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလူတွေကိုလက်မခံဖို့ အတင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲ??. တကယ်တမ်းကြတော့ ရခိုင်တွေဟာ နောင်ရေးကိုတွေးပြီး ကြောက်ကန်ကန်နေကြတာပါ။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်ကလင့်လေးဝင်ကြည့်ပြီး…ဘလော့ပိုင်ရှင်..တင်ထားတဲ့ Robert Mole ရဲ့ The Temple Bells are Calling စာအုပ်လေးကို (US& UK libraries) တစ်ချို့မှာရှာဖတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဟိုတနေ့က ဖေ့ဘွတ်မှာ သခင်ချန်ထွန်းက ဆိုးရွားလှတဲ့ အဲဒီကျုးကျော်လာသူတွေ အကြောင်းပြောထားတာဖတ်လိုက်ရတယ်။ တဖက်က ၀င်လာတဲ့လူ အားလုံးကိုမကောင်းဘူး မပြောပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိုးရိမ်ရေမှတ်ရဲ့ အထက်မှာရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို နိုင်ငံတကာက စိန်မာတင်ကျွန်းကို လူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ပြီး ပေးလိုက်တယ်၊ ဗမာအစိုးရကလည်းငြိမ်ခံနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကလည်း ဒီကောင်တွေကို အားပေးအားမြှောက်ပြုလိုက် သလိုဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအစိုးရ နိုင်ငံတကာနဲ့ ပတ်သက်လာရင် “အချဉ်” ပဲလို့မှတ်မှာပေါ့။ သတိတော့ ကောင်းကောင်း ထားသင့်တယ်ထင်တယ်။ ရခိုင်တွေကလည်း သွေးပူနေ၊ လုံခြုံရေးကလည်း မလုံလောက်တော့ ဒီကောင်တွေ ကစားတဲ့ အကွက်ထဲဝင်သွားနိုင်တယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံကလူတွေ ဘာမှတောင်မရကြသေးဘူး။ ကိုယ်တွေကဟိုပေးဒီပေး စပေးနေရတယ်ဆိုတော့။ နိုင်ငံတကာလည်း နဲနဲစဉ်းစားသင့်တယ် ထင်တယ်။ သို့သော်လည်း အစဉ်အလာရှိတဲ့ တပ်မတော်ကိုတော့ ဒီကောင်တွေ ပြန်လုပ်ရဲလောက်တဲ့ သတ္တိမရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“၁၀ယောက် နဲ့တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတော့ ကမ္ဘာ့ သတင်းလေးဘာလေး ကြည့်ပေးရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။ “ Genocide of Rohingya” “racist Rakhines”ဆိုပြီးတော့သူတို့ ဘာအတွက် အတင်းစွတ်အော်နေတာလဲ??..”
ှကျွန်တော်.ဗဟုသုတနည်းပါးမှုအတွက်sorry ပါလို့တောင်းပန်ချင်ပေမဲ့ဒိက Brother ကိုလဲ ခင်ဗျားခွေးရူးလို့နာမည်တပ်လိုက်တဲ့လူတသိုက်ခမျာအဲဒီGenocide of Rohingya” “racist Rakhines”ဆိုတာတွေစာလုံးတောင်ပေါင်းတတ်မှာမဟုတ်သလို ယနေ့Online ပေါ် မှာဘယ်လောက်တောင်အတုအယောင်မုသားတွေများလဲဆိုတာ ခင်ျေားနားလည်တဲ့အခါမှပဲပြောတော.မယ်
မှန်တာပေါ့..online အတုအယောင်တွေပေါလွန်းလို့..ပါကစ္စတန်က နေလုပ်နေတယ်လို့တောင်..အန္ဒိယကပြောတာပေါ့..မြန်မာပြည်မှာဖြစ်သွားတာရော..အန္ဒိယမှာ
..ဘင်္ဂါလီတွေ အကြမ်းဖက်တာရော..အင်တာနက်ပေါ်က လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းတွေ
…ပါကစ္စတန်ကနေ..တာထွက်ပါတယ် လို့တောင်.ပြောထားတယ်လေ။ ဒါနဲ့.လက်တို့ပြီးတော့ပြောရအုံးမယ်..ပါကစ္စတန်မှာ..နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတဲက မြန်မာပြည်သား..ရခို်င်ကနေ ထွက်ပြေးလာတာပါဆို တဲ့လူတွေ ထောင်(သို့)သောင်းနဲ့ချီရှိတာ ခင်ဗျားသိသလား။ ကျွန်တော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကမှစသိတယ်..ဘယ်သူတွေလည်းဆိုတာ။ အဲသလိုဗဟုသုတနဲခဲ့တာ။ဗဟုသုတ နည်းပါးတဲ့..အတွက်..တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူး။
မကုန်နိုင်ပါဘူး။ ”ပညာလိုအိုသည်မရှိ” တဲ့။ မသိရင်လေ့လာဖို့
သက်သက်သာ ပြောတာပါဗျာ။ ဒီအပိုင်းမှာ..ခင်ဗျားမသိတာတွေ ရှိနိုင်ပေမဲ့။ တစ်ခြား ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ ဗဟုသုတ တွေအများကြီး.ခင်ဗျားမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကလွဲ
လို့ ဘယ်သူကိုမှ အထင်မသေးရဲပါဘူး။ ခင်ဗျားဗဟုသုတနည်းတယ်လို့ ပြောနေတာလည်း လက်ခံရခက်ခက် ဘာလို့လည်း..ဆိုတော့ ခင်ဗျားမေးတဲ့ မေးခွန်းမျိုး
ခပ်ဆင်ဆင်ကို ဗဟုသုတကြွယ်ဝတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ နိုင်ငံခြား
သတင်းထောက် တစ်ယောက်က..တောနယ်ထဲက..ရခိုင် တစ်ယောက်ကို
ပြန်မေးထားတာကြားဘူးတယ်…ကိုယ့်ကိုကိုယ် အသေခံဗုံးခွဲမှု..ကိုယ့်ကိုကိုယ် မီးရှို့သတ်သေမှု သတင်းတွေရှိနေတဲ့ခေတ်မှာ..သူမို့လို့..တောထဲကလူတစ်ယောက်ကို..ကိုယ့်အိမ်ကိုမီးရှို့တာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ဆိုတာမျိုး ခပ်ဆန်ဆန်မေးရတယ်လို့။ဟိုလူက..သူ့ဘာသာ တောနယ်ထဲမှာ ဘ၀အတွက် ရုန်းကန်နေ..လှုပ်ရှားနေရတာ ဒီနိုင်ငံခြားသားကို ဘယ်လို သာဓကတွေနဲ့ရှင်းပြမလဲ။ အဲဒီတော့..ဘာတွေတွေ့ လာရလည်း ဆိုတော့ ဗဟုသုတအပြင် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ တွေးခေါ်ကြံဆမှု ဆိုတာတွေ အရမ်းလိုလာပြီ။ လူတွေပြောနေကြတာတော့ critical thinking တို့ reflective thinking တို့ analytical thinking တို့ ဆိုတာတွေလိုလာပြီ creative thinking လည်း ပါမှာ ပေါ့လေ(ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘာဗျာ ပြောနေကြသံကြားတာပါ၊ သိချင်ရင်ဝယ်ဖတ်
အဲဟုတ်ပါဘူး..သိချင်ရင် google it! )အဲဒီလို ဆင်ခြင်မှုတွေ မရှိရင်တော့ “ဗဟုသုတများသည် နှုတ်တိုက် ကျက်မှတ်ထားတဲ့” အဆင့်လောက်သာရှိလိမ့်မည်။ ”ခွေးရူး” ဆိုတာ ကျုးကျော်လာသူ အားလုံးကို
ပြောခြင်း မဟုတ်(အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ အထဲမှာ ပါပါတယ်)။ အစွန်းရောက်..အကြမ်းဖက်.အဲဒီ brain wash လုပ်ခံထားရတဲ့..ခွေးရူးနှင့် တူသော (ခွေးရူးသည် ရောဂါကြောင့်..စဉ်းစားဥာဏ်
ကင်းမဲ့..မြင်သမျှ..ကိုက်ဖဲ့..ခွေးကောင်းတွေတောင်..ဖက်ပြိုင်မကိုက်ရဲ..ထွက်ပြေးရ) လူတွေကိုဆိုလိုပါ သည်ခင်ဗျား။ ဒီလူတွေက “Genocide” တို့ “Racist” တို့ မသိပါဘူး ဆိုတာ ဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ မဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျုးကျော်သူလာသူတွေထဲက တစ်ချို့ဟာ NGO တို့ UN တို့မှာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာမမေ့နဲ့နော။ အဲဒီမှာ လုပ်ဖူးတဲ့လူတွေဟာ..အနည်း နဲ့ အများတော့ train လုပ် ပေးထားချင်းခံရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတုို့ ကပြောနေတယ်လို့ ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကွန်မန့် အစမှာ ရေးခဲ့သလိုပဲ သူတို့ရဲ့ ဆရာ့ ဆရာကြီးများဟာ ပါကစ္စတန် အပါအ၀င် ယူအက်.ယူကေ..သြစတျေးလျ..စသည်မှာ refugee အဖြစ်နဲ့ရောက်ပြီး ပညာတတ်တွေဖြစ်နေတာဟာ..နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပါ(ရခိုင်တွေတောင် အဲဒီလောက်များများ မရှိရှာဘူးထင်တယ)်။ အော်နေတာက အဲဒီလူတွေပါ။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာဖက်က သူတို့ ကိုထောက်ခံတဲ့ မူဆလင်တစ်ချို့နဲ့၊ နေရင်းဘင်္ဂလားဖက်ကရှိတာတွေနဲ့ဆိုတော့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ပါဘူး။ ရခိုင်မှာ ကျုးကျော်နေတာတွေက…အခုအချိန်မှာတော့ နယ်ရုပ်သာသာ အဆင့်လောက်သာရှိပါတယ်။
တောင်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ :D (နောက်ထှာပါ၊ အထဲမ၀င်ချင်သေးဘူး)။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားလည်နေပြီထင်တာ..ခင်ဗျားပြောမှပဲ…သြော်..ငါဟာ..”ဆန်မရှိ ဆောက်ရမ်းမွေး(မှားပြန်ပြီ)စောက်စားကြီး” တဲ့ကောင်ပါလားလို့သိတော့တယ်။
ကောင်းပါ့ဗျာ…….ခင်ဗျားပြောတဲ့ brian wash က ခု၇ခိုင်တွေဆီ ကိုစိမ့်ဝင်လာမှာစိုးလို့ပါ ခုတောင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကူးစက်နေပြီဆိုတာ သိသာနေတာပဲ
တစ်ချို့ဟာ NGO တို့ UN တို့မှာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ဒီလိုလူတွေ နှစ်ဖက်စလုံးမှာသေချာပေါက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ရယ် ဒီပြသနာဟာOnline ပေါ်ကပုံကြီးချဲ့မီးထိုးတာတွေကနေစခဲ့တယ်ဆိုတာလြဲပြန်ပြိးဆင်ခြင်ကြရမယ်
ခုတောင် ဒီPost နဲ့ comment တွေဖတ်ပြီးပြုံးနေတဲ့လူတွေ ရှိနေရောမယ်
ကျန်တဲ့ အကြောင်းတော့ လောလောဆယ် ဘာမှမပြောချင်သေးပါဘူး။ ကိုမိုးတိမ်က သူကြီးနဲ့ တရားတဘောင်များ ဖြစ်ထားသလားလို့။ လိုအပ်ရင် ကျနော်လဲ အခမဲ့သက်သေတို့ ရှေ့နေတို့ ခင်ဗျားဘက်က လိုက်ပေးပါ့မယ်။ တရားခွင်လို နေရာမျိုးမှာ သူကြီးနဲ့ အပြန်အလှန် လျှောက်လဲချက် ပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ ပျော်စရာကြီးပဲ။
ဘာမှတရားတဘောင်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဗျ။ကျုပ်ဘယ်သူလဲ ဘာကောင်လဲဆိုတာ သိပ်သိချင်နေတာကတော့သေချာပါတယ်ခင်ည။တစ်ခုတော့တွေ့မိတယ်ခင်ဗျ။ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ရေးတဲ့ post တွေဆိုရင်အတော်များများကလက်ရှောင်နေကြတယ်ခင်ဗျ။post နဲ့မဆိုင်တာတွေရောက်လာပြီ။စကားအတင်းစပ်ရရင် ကိုစံလှကြီးနဲ့တော့ အပြင်မှာ တစ်ကယ်ဆုံဖူးချင်တယ်ဗျို့ ။အမြင်ချင်းက ထပ်တူနီးပါးဖြစ်နေလို့ပါခင်ဗျ။
ပို့စ်နဲ့ ဆိုင်တာလဲ နည်းနည်းပြောမယ်။ မဆိုင်တာလေးလဲ နည်းနည်း ပြောမယ်ဗျာ။ ဒီလိုဗျ။ ကျနော့်အနေနဲ့ ဒီကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာ မတူဘူးဆိုတာက တတ်နိုင်ရင် မဆွေးနွေးတာ ကောင်းတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လေးထောင်နဲ့ အဝိုင်းလို ဘယ်လိုမှ တူအောင်လုပ်လို့မှ မရတာ။ ဒီတော့ သူလည်း သူ့ဘာသာသူ ကျင့်ကြံ ကိုယ်လဲကိုယ့်လမ်းစဉ် အတိုင်း ကျင့်ကြံပေါ့။ အခု ရခိုင်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတာတွေက ကိုယ်က ဆောင်းပါးဝင်ရေးတာထက် အစိုးရက ကိုင်တွယ်တာက ပိုကောင်းတယ် ထင်လို့ပဲ။ ကိုယ်က ဆောင်းပါးရေးရင် သက်ဆိုင်ရာ အစ္စလာမ် ဘာသာကို ကိုယ်ကစပြီး တိုက်ခိုက်သလို ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ အမှန်တော့ ရခိုင်ဘက်မှာ ဖြစ်နေတာတွေက ကြာတော့ ကြာနေပြီ။ အခုမှ လူသိရှင်ကြား သဘောမျိုး ဖြစ်လာတာ။ ဟိုတုန်းကတော့ ကြိတ်ပြီး ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့။
တနည်းတော့လည်း ကောင်းပါတယ်။ အမှန်တော့ တချို့ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဒီအရေးအခင်း မဖြစ်ခင်တုန်းက ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရေး ဆိုတာတောင် လှုံ့ဆော်ဖူးတာ ရှိတယ်။ စဖြစ်တုန်းကတောင် မီဒီယာတခုမှာ ကုလားတွေက အရေးမကြီးပါဘူး အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပါ။ အဓိကက ဗမာတွေကို ရှင်းပစ်ရမှာ ဆိုတာမျိုး ပြောတာတောင် ရှိတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အွန်လိုင်း ပေါ်ဆိုတော့ ပြောသူဟာ တကယ်ပဲ ရခိုင်လား ကုလားက အယောင်ဆောင်ပြီး ပြောတာလားတော့ အတပ်မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရခိုင်သွေးသား အချို့မှာ ဒီလိုသဘောထား ရှိတာတော့ အမှန်ပဲ။ ကျုပ်က ကိုယ့်ဆွေကိုယ့်မျိုးတွေ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်း နားလည်တယ်။
အခု တကယ် ဖြစ်လာတော့ ကျန်လူတွေက ဝိုင်းကူရတော့ တတ်နိုင်သလောက်တော့ စည်းလုံးမှု ရတာပေါ့ဗျာ။ ဒါက အကောင်းဘက်က ကြည့်တာပါ။ ကျနော့် သူငယ်ချင်းထဲမှာလည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရှိတယ်။ သူကတော့ အတော် နူးညံ့ပါတယ်။ နူးညံ့ဆို သူရော တမိသားစုလုံးရောက ပညာတတ်တွေကိုး။ အိမ်ထောင်ကျတော့လဲ တလင် တမယားပဲ။
အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကို တချို့အခွင့်အရေးတွေ ပိတ်ပင်ထားတာက သူတို့ကို နှိပ်ကွပ်ချင်တာထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ချင်လို့ပဲ။ ဒါက ကျနော့်အမြင်ပါ။ အမှန်တော့ သူတို့အနေနဲ့ အများကြီး မဟုတ်ရင်တောင် အခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ အသိုက်အဝန်းထဲမှာ တရားမျှတမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ အခွင့်အရေးတချို့ ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အသိုက်အဝန်း ရပ်ဝန်းထဲမှာတော့ အခြားလူတွေက သူတို့ရတဲ့ အခွင့်အရေးမျိုး ရဖို့မလွယ်ပါဘူး။
အခု ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကတော့ ခေါင်းဆောင်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။ ကိုင်တွယ်နိုင်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ်။ ဒါက ပို့စ်အတွက်ပါ။
ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်တာ ပြောရရင် ကိုယ့်လူရေးတဲ့ ပို့စ်တော့ ကျုပ်မသိဘူး။ ကျုပ်ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေကို လက်ရှောင်သူတွေလည်း ရှိမှာပေါ့ဗျာ။ ဒီတော့ ကျုပ်ကလည်း ကျုပ်မသိတဲ့ လူတွေကို သိပ်ပြီး ကွန်မန့်ပေးချင်တဲ့ အခါလောက်ကလွဲရင် သွားပြီးမပက်သက်ဖူးပေါ့။ ဘုရားရှင်တောင် ရဟန်းတွေကို မဖိတ်ထားတဲ့အိမ်ကို ဆွမ်းစားမကြွရဘူးလို့ ပညတ်တယ် မဟုတ်လား။ ဒီတော့ ကျုပ်ကလည်း သူတို့ပို့စ်တွေကို ဆွမ်းစားမကြွဘူးပေါ့။
အမှန်တော့ ကွန်မန့်ပေးဖို့ လက်ရှောင်ပေမယ့် သေသေချာချာ လိုက်ဖတ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တခါတလေ ကျုပ်တခုခု ရေးလိုက်ရင် အပြင်ကနေပြီး ဒီလို သဘောမထားပါနဲ့ ကိလေသာတွေကို လျှော့ပါ ဘာညာကွိကွဆိုပြီး သီးသန့်ပို့စ်တွေ တတ်လာတတ်တယ်။
လက်ရှောင်ဆို ကျုပ်ကလည်း ရေးတဲ့ပို့စ်တချို့က လူတယောက် သို့မဟုတ် အယူအဆတခုကို against လုပ်ပြီး ဆွေးနွေးတာ ရှိတာကိုး။ ဒါမှလည်း သူကြီးပြောတဲ့ ငြင်းခုန်မှုအနုပညာ မြောက်လာမှာကိုး။ အမှန်တော့ ကျုပ်ရေးတဲ့ပို့စ် အားလုံးထဲမှာ ဒီနေ့အထိ “စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် (၁၈) တိုင်းရင်းသားအရေးသို့ ပြန်ကြားချက်” ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။ ကျုပ်အကြိုက်ပါ။ အခု ပြန်ဖတ်ရင်တောင် ကြိုက်နေသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ရွာသားကြီးတို့ ရွာသူကြီးတို့ ကွန်မန့်ပေးဖို့ တော်တော်လေး လက်ရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် ဦးဦးပါလေရာရယ် ကို htoosan ရယ် ကိုကြောင်ဝတုတ်ရယ် အရှုံးတွေနဲ့ ကျွန်တော်ရယ် ကိုရွာစားကျော်တို့ပဲ ကွန်မန့်လာပေးကြတယ်။ ဆိုလိုတာက ပုံမှန်ဖတ်လေ့ ရှိသူတွေထဲကပါ။
ရေးတာကလည်း ပဋိပက္ခသဘောမျိုး ပါနေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ အဲဒီလို မရေးလို့ မရဘူး။ ကွန်မန့်ပေးဖို့ လက်ရှောင်ပေမယ့် လူတိုင်းနီးပါး ဖတ်တာ သိသာပါတယ်။ တရက်အတွင်းမှာပဲ hits က ချက်ချင်း ရာကျော်သွားတာကိုး။ ဒါတောင် ကျုပ်ပို့စ်တင်တုန်းက ညနေပိုင်းလေး တင်တာ ချက်ချင်းပဲ ဗဒင်ဆိုတဲ့ သီချင်းလို သူနဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလို အဲဒီညနေက အားချင်းပို့စ်တွေ တတ်လာလိုက်တာ တခါတည်း တညတည်းနဲ့ ကျုပ်ပို့စ်ကလေးက Home page ကနေပျောက်ပြီး နောက်စာမျက်နှာ ရောက်သွားတော့တာပဲ။ ပို့စ်အဟောင်းကို ပြန်တင်တယ် ဆိုတာတောင် ပါလိုက်သေးတယ်။ ပညာတွေပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် နှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲ ကျုပ်မှတ်မိသလောက် hits က ငါးရာကျော်သွားတယ် ထင်တယ်။ ဒါတောင် အဲဒါက sticky ရတဲ့ပို့စ်မဟုတ်ဖူး။
ကျုပ်ကလည်း ဒါမျိုးကို သိပ်ဝမ်းသာတယ်။ အခု အဲဒီ hits စနစ်လေး ပျောက်သွားတာ အတော်နှမြောလို့ မဆုံးဘူး။ ကျုပ်က အဲဒါကို ကျန်တာတွေထက် တန်ဖိုးထားတယ်။ လူကြီးတွေ ပြောသလို ကျော်ဆွေ အကယ်ဒမီမရပေမယ့် သူ့ခေတ်က သူ့ကားတွေက ရုံတင်တာနဲ့ ရုံပြည့်ပြီလို့ စာတန်းချိတ်ရတာပဲ ဆိုတာ ကျနော်က သိပ်သဘောကျတယ်။
ဘာသာမတူရင် မဆွေးနွေးပေမယ့် မိုးပြာဆရာတွေကျတော့ တမျိုးဗျ။ သူတို့က ဆွေးနွေးတာကို သိပ်ကြိုက်တဲ့လူတွေ။ ဒါကြောင့် ဆွေးနွေးပေးရတာ။ ဆွေးနွေးရတော့လည်း သူတို့ကို မေးရတာ ကျောက်ခဲ ရေညှစ်ရသလိုပဲ။ ဘာမှကို တာဝန်မယူတော့ပဲ ခေါင်းရှောင်တော့တာ။ အတော် ရယ်ရတဲ့လူတွေ။
ဆိုလိုတာက ကျုပ်အတွက် လက်ရှောင်ရှောင် မရှောင်ရှောင် လူတွေဖတ်ရင် ကျေနပ်တယ်လို့ ပြောတာ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်ဖတ်နေကျ မိတ်ဆွေတွေတော့ ကွန်မန့်တွေပေးပြီး မေးတာတွေ ဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ လူဆိုတာကတော့ အကြိုက်ချင်း မတူဘူးပေါ့ ကိုမိုးတိမ်ရေ။
“အမှန်တော့ တချို့ရခိုင်လူမျိုးတွေက ဒီအရေးအခင်း မဖြစ်ခင်တုန်းက ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ရေး ဆိုတာတောင် လှုံ့ဆော်ဖူးတာ ရှိတယ်။ စဖြစ်တုန်းကတောင် မီဒီယာတခုမှာ ကုလားတွေက အရေးမကြီးပါဘူး အချိန်တန်ရင် ပြီးသွားမှာပါ။ အဓိကက ဗမာတွေကို ရှင်းပစ်ရမှာ ဆိုတာမျိုး ပြောတာတောင် ရှိတယ်။”
ဟုတ်ပါတယ် တချို့ကဆိုဒုတိယ စင်ကာပူတို့ အာရှရဲ့နောက်ထပ်ကျားတစ်ကောင်ဖြစ်လာဖို့တို့တောင် အိပ်မက် တွေရှိနေကြတာပါ ခုပြသနာတေါကလဲအဲလိုလူတွေက အသိဥာဏ်နည်းတဲ့လူတွေကိုခေတ်အပြောင်းအလဲမှာကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချပြီးဖန်တီးလိုက်တာပါပဲ ဒါပေမဲ့ အစိုးရကသူတို့ထက်တစ်ကွက်ကျော်မြင်ပြီးချပေးလိုက်တဲ့ငါးစာကိုမမြင်ကြလေတော့ အားလုံးထက်ရှေ.မရောက်တဲ့အပြင်သူများနောက်ဟိုးအဝေးကြီးမှာကျန်နေခဲ့ရတော့မှာ…..
အရီးကို best comment ပေးပြီးသွားလို့ ကိုစံလှကြီးကိုမပေးနှိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျ။ရှင်းရှင်းပြောရရင် ခင်ဗျားပြောတာတွေအားလုံးက အကုန်အမှန်တွေချည်းပါပဲ။ရခိုင်တွေကို ကျုပ်တို့ဝိုင်းကူရတာ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်နဲ့ပါ။သူတို့က အရင်သမိုင်းကြောင်းကိုပြန်တူးဖော်ပြီးခွဲထွက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ကျုပ်သူငယ်ချင်းထဲမှာ ရခိုင်ရော၊ကုလားကောရှိပါတယ်။၂ဘက်စလုံးက သဘောထားပြင်းထန်ကြပါတယ်။ပညာတတ်တွေပေမယ့် အဲဒီနေရာမှာ သဘောထားမကြီးကြပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝင်ပါရရင်တော့ ရခိုင်ဘက်ကပဲ ပါရပါလိမ့်မယ်။လက်သည်းစိတ်ရင်လက်ထိပ်နာတယ်ဆိုတဲ့ ဦးဦးပါလေရာ စကားအရ လက်ထိပ်နာပါတယ်။(၁၃၅)မျိုးသော လူမျိုးကိုစော်ကားတာဟာ ဗမာကိုစော်ကားတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပြောရရင် ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုကွဲဖို့က အဓိကပါပဲ။ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မြန်မာတည်ရှိစေချင်တာ ကျုပ်ရဲ့ ဆန္ဒပါပဲ။ဒါ့ထက် sticky ရတဲ့ပို့စ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ် ကိုစံလှကြီးဂရုမစိုက်ပါနဲ့။ရလို့ တစ်ကျပ်မှမရသလို မရလို့လဲ တစ်ကျပ်မှ မပေးရဘူးလို့သဘောထားလိုက်စမ်းပါခင်ဗျာ။သူ့ဆိုဒ်မှာ သူပေးချင်သလိုပေးမှာပေါ့။အခုလိုဝင်ပြောခွင့်ရနေတာတောင် ကျေးဇူးတင်နေပါပြီ။လူဆိုတာ အမြင်ချင်းထပ်တူကျဖို့က အတော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲခင်ဗျ။ကိုစံလှကြီးပြောတဲ့အထဲမှာလဲ တစ်ချို့ ကမိုးပြာယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါတယ်ခင်ဗျ။အဓိကကတော့ ဖျက်ဆီးချင်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေကိုတွေ့နေရလို့ မနေနှိုင်ရင် သောက်ညင်အကပ်ခံပြီးဝင်ပါနေရတာပါ။အကြိုက်ချင်းမတူတာကို လက်ခံပေမယ့်စော်ကားဖျက်ဆီးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ဆောင်ရင်တော့ ကျုပ်လဲကျုပ်ပြောချင်တာကိုပြောပါမယ်။
အမှန်တော့ ကျုပ်ကလည်း ရခိုင်သွေးသားတွေကို သိစေချင်တာက လူဆိုတာ လက်သည်းဆိတ်တော့ လက်ထိပ်နာတတ်တယ် ဆိုတာနဲ့ အရေးကြီးရင် သွေးနီးရာချိုကြတာပဲ ဆိုတာကို သိစေချင်တာပါ။ ဒီအရေးအခင်းကို အကြောင်းပြုပြီး သူတို့စိတ်ဓတ်တွေ နည်းနည်းပျော့ပျောင်းသွားစေဖို့ပေါ့။ ကျုပ်ပြောတဲ့ အကြောင်းတွေဟာ တခါတလေ ကျုပ်မကျေနပ်တာထက် ပြောသင့်တယ် ထင်လို့ ပြောတာဗျ။ မပြောဘူး ဆိုရင် ကျုပ်က တအုံ့နွေးနွေး ဖြစ်နေတော့မှာ။ အဲဒီတော့ ပြောလိုက်တော့ စိတ်ရှင်းသွားရော။ ပြင်တာ မပြင်တာက တဘက်လူ ကိစ္စလေ။ သေသေချာချာတော့ highlight လုပ်ရအုံးမယ်။ ကျုပ်က စတစ်ကီဆိုလား ဘာဆိုလား ရချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီ ရတယ်ဆိုတဲ့ တချို့ဆောင်းပါးတွေ ရှေ့နောက် မညီတာတွေ တွေ့ပြီးကတည်းက သိပ်ပြီး မထင်တော့ဘူး။ ကျုပ်အထင်ကို ပြောတာနော်။ ကျုပ် ဥဏ်မမီလို့ နားမလည်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူကြီးတို့တော့ နားလည်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် hits ဆိုတဲ့ စနစ်လေး ပျောက်သွားတာတော့ တော်တော် နှမြောတယ်ဗျို့။ အဲဒါက ကျုပ် မန်းဂေဇက်မှာ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရာပဲ။
အတိတ်က သမိုင်းတွေသာ ပြန်ဖော်ကြေးဆို ကျုပ်ကလည်း ဗမာတွေဘက်က ဆတူကြေး လောင်းပြီးတောင် ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်။ အဲဒီတော့ ရခိုင်သွေးချင်းတွေ သဘောထားတွေ ပျော့သွားစေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ဆဲချင်လဲ ဆဲကြ
အဲဒီ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို အရင် စစ်အစိုးရ ကို တစ်လလောက် ပြန်လာ ရှင်းပေးစေချင်တယ်
ဦးပေရေ……ခင်ဗျားကိုတော့မဆဲရဲပါဘူးခင်ဗျ။ယုံကြည်မှု့ထပ်တူနည်းပါးရှိတယ်လို့ယူဆပါကြောင်း။အဲခင်ဗျားပြောသလိုလုပ်ရင် သူတို့လိုချင်သောအကွက်ထဲရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အခုတောင်နိုင်ငံတကာကို အရှက်မရှိအော်နေတာကြည့်ပါခင်ဗျား။ဒေါသစိတ်လေးတွေလျှော့ကြပြီး မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
အပေါ်မှာကိုစံလှကြီးပြောသွားတဲ့အချက်လေးတွေက တော်တော်ကောင်းတာလေးတွေပါပါတယ်။အခုအစိုးရကိုင်တွယ်နေတာကလဲ တော်တော်ပညာသားပါပါတယ်။အစိုးရ အတော်တော်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။အဲဒါကိုမကြေနပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေ၊မြန်မာ့ဆန်စား၊မြန်မာရေသောက်နေ
ပြီးတော့ မြန်မာကိုပြန်ရန်ရှာနေတဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ကမြန်မာစာနဲ့ မြန်မာကိုပြန်စော်ကားနေတာ ကျုပ်ဖြင့်သူတို့အစားရှက်မိပါရဲ့ ။
စကားလုံးကြမ်းကြမ်း..ကြီးကြီးတွေ.. မသုံးကြဖို့… ပြောလိုပါတယ်နော…
အဖမြေ.. အမိဧရာဝတီကို.. တကယ်ချစ်ရင်…
ပိုပိုပြီး.. ဆိုးဝါးတောက်လောင်လာအောင်.. မလုပ်သင့်ကြပါဘူး..။
ရွာသူားအချင်းချင်းတွေပဲ..။ လူချင်းလည်းတွေ့နေကြတာမှ မဟုတ်တာ…။
ခင်ခင်မင်မင်.. ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါ့…။ :harr:
သူကြီးမင်း ခင်ဗျား..အခုလို ကျွန်တော်တို့ကို အခုလို သတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သာမန်ပုထုဇဉ်လူသားမို့ မပြောတော့ပါဘူးလို့ ကတိမပေးနိုင်ပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ မသုံးမိအောင် သတိထားပါမည်။ တစ်ခုတော့စိတ်ချပါ နင်ပဲငဆ ဆဲဆိုတာမျိုးတော့ ကျွန်တော် ခုချိန်ထိ ဂေဇက်ပေါ်မှာ ရော ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာရော(အပြင်မှာတော့ လုပ်ရင်လုပ်မှာပေါ့လေ)ခုချိန်ထိ ဘယ်တော့မှ မလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။
ဘေးကပဲ ရပ်ကြည့် နေပါတယ်ဗျာ
သို့သော်အဲဒါအမှန်တွေချည်းပါပဲ။အတတ်နှိုင်ဆုံးတော့ ရှောင်ပါတယ်။ကျုပ်လဲကိုစံလှကြီးပြောသလို တတ်နိုင်ရင်ပိုပြောပြစ်လိုက်၊မဟုတ်ရင် လစ်လျှူရှု့ ၊နောက်ဆုံးမရရင် ရယ်လိုက်ပါ လမ်းစဉ်ကိုသဘောကျလို့ ပြောချင်ပြောမယ် မပြောချင်မပြောဘူးဗျာ။garuda နဲ့ sniperလဲ တစ်ကယ်တော့အတွေးအမြင်က အတူတူပါပဲ။ချည်းကပ်ပုံချင်းကမတူလို့ပါ။ဒါပေမယ့် ကုလားအားကိုးပုစိန်ရိုးဆိုရင်တော့ ကျုပ်ကရှင်းချင်ရှင်းမှာပါ။အအခုတော့စောင့်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်။
ကိုမိုးတိမ်တို့ ကိုစံလှကြီးတို့နဲ့ သဘောထားတစ်ထပ်တည်းရှိပေမဲ့ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ ဥာဏ်မမှီ
တာကြောင့် လက်ရှောင်ပြီး တိတ်တ်ိတ်လေးဝင်ဖတ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားတာပါ။ အမှန်တော့ ကိုမိုးတိမ်
ပိုစ့်ကော ကိုစံလှကြီးပိုစ့်ကော ကော့မန့်တွေကောအမြဲတမ်း ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာ…….။
စစ်ယူနီဖောင်း လဲထားတဲ့ အစိုးရမှာသာ တာဝန်ရှိတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား မောင်ပိုင်စီးထားချင်အုံးလေ…။ ပြသနာဖြစ်တော့လည်း စားဝါးထားတာလေးတွေ နည်းနည်းတော့ အစာကြေအောင် လှုပ်ရှားပေးအုံးမှပေါ့။ မလုပ်တတ်ရင် အတိုက်အခံနဲ့ အာဏာခွဲဝေ အုပ်ချုပ်ပါ။ အစာကြတော့ တကိုယ်တည်းဝါးပြီး တုတ်အရိုက်ခံရတဲ့ အလှည့်ကြမှ တဝက်စီဆို ဘယ်ဖြစ်ပါ့မတုန်းကွယ်..။
ဘီစီ ပေးထားလို့ ကျေးဇူးပါ။
ဒီ ဆိုက်မှာ ဘီစီ ပေးတဲ့ စနစ်က အရီးမှတ်ချက်ကို BC ပေးထားတာကနေ မင်းစိတ်ထဲ ပိုကြိုက်တာ တွေ့ရင် ပြန်ပြောင်းပေးလို့ ရတဲ့ စနစ်ပါ။
ကိုစံလှကြီးမှတ်ချက် က ပိုပြီး ကောင်းတာ မို့ မင်း အနေနဲ့ ပြောင်းပြီး ပေးခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါဟာ မင်းရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့် ကို ဖန်တီး ပေးတဲ့ စနစ် ရှိကြောင်း ကို ပြောပြတာပါ။
ပိုကောင်းတဲ့မှတ်ချက် ထပ်ရလာ တာ ကို ကိုယ့် အရီးကို ပေးပြီး ဖြစ်လို့ အားနာပြီး ဒီအတိုင်း မထားစေချင်ပါ။
ပြောင်းလို့ရတဲ့၊ ပြောင်းခွင့်ရှိတဲ့ စနစ်မှာ ရဲရဲသာပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
ဘာလို့ ပိုကောင်းတဲ့ ဘက်ကို မပြောင်းဘဲ နေရမှာလဲ။
ဒါကို အရီး ကလဲ စိတ်နု မနေသင့်ဘူး။
ပိုကောင်းတာကို လက်ခံရမယ်။ မဟုတ်လား။
ဒီလို အသေးအဖွဲ လေးတွေ ကနေ ပြင်ပြီး ပိုကောင်းတာကို ရအောင် ကျင့်ယူကြရအောင်။
ရွာ က အရီး တို့ ရဲ့ လေ့ကျင့်ကွင်းပေါ့။
ဒါထက် အရီး တို့ မသိနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ တွေ မင်းဆီမှာ အများကြီးရှိပါတယ်။